आज मध्यरातअघि निस्केर काठमाडौँका गल्ली गल्ली घुम्छ यो अनौठो आकृति – MySansar
Posted on September 24, 2018 September 24, 2018 by Salokya
सोमबार राति इन्द्रजात्राका क्रममा भैरव र गणेशको रथ सँगै जीवित देवी कुमारीको रथयात्रा सकाएर कुमारीलाई दरबारभित्र लगिन्छ। रथयात्रा सकिएको संकेत स्वरुप तोप पड्किन्छ। जात्रा हेर्न आएकाहरु विस्तारै घर फर्कँदै हुन्छन्। मध्यरात हुनुअघि भूकम्पका कारण भत्किएर जगमात्र बाँकी रहेको काष्ठमण्डप पछाडि भुति सत्तलबाट एउटा अनौठो आकृति निस्कन्छ। ट्याङ ट्याङ ट्याङ ट्याङ धिमे भुस्या नामको एउटा परम्परागत बाजा एकनासले बजिरहेको हुन्छ। एउटा सेतो मुकुण्डो लगाएको मान्छे बाहिरिन्छ। जामा पहिरिएको यो मान्छेको आँखा कसैले छोपेको हुन्छ। आँखा छोप्नेले मरु गणेशस्थान आएपछि बल्ल छोपेको हात निकाल्छ। तर पनि यो अचम्मको आकृतिको दुवै हात फैलिएको हुन्छ। ती हातहरु अन्य सहयोगीले समातिरहेका हुन्छन्। संगीतको तालसँगै यो आकृति मध्यरातमा काठमाडौँको गल्ली गल्ली परिक्रमा गर्न निस्कन्छ। यो आकृतिको पछि पछि हुन्छ सयौँ मानिसहरु। ती सबै सेतो पहिरनमा हुन्छन्। काठमाडौँमा हरेक वर्ष इन्द्रजात्राका बेला देखिने यो दृश्यको रहस्य के हो त ? आखिर को हुन् यिनी ?
1 thought on “आज मध्यरातअघि निस्केर काठमाडौँका गल्ली गल्ली घुम्छ यो अनौठो आकृति”
suchalovely and informative article